Tetsy Manarintsoa-Isotry indray no lasibatra ny harivan’ny talata teo. Manodidina ny tamin’ny fito ora hariva no tonga ny dimy lahy mitam-basy nanafika. Napoaka ny basy mba hampitahorana ny olona izay mbola marobe no nivezivezy teo an-toerana tamin’io fotoana io. Nifanitsa-kitro nitsoaka ny mpandeha an-tongotra ary vokatr’izany dia nisy efatra izay naratra mafy.
TOMPON’ANDRAIKITRA MARO NOSOLOINA
Rivo-doza be no mihatra ao amin’ny ministeran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ny toeram-ponenana. Izay no vokatry ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Nosoloina avokoa ny talem-paritra rehefa eto Madagasikara. Midika izany fa tsy nisy nahafa-po ny Minisitra Hajo Andrianainarivelo izany na ny iray aza ireo olona izay izy ihany no nifidy ireo ho eo amin’ny toerany. Tsy mbola nisy toa izany teo amin’ny tantaran’ny fanendrena olona ambony teto Madagasikara ary tsy azo eritreretina izany hoe miara-tsy mahavita ny asany izay rehetra napetraka. Efa endrika fanaparam-pahefana no misy.
Tsy hay intsony izay marina amin'ny filazan'ny météo malagasy momba ny toetrandro. Manaporofo fa tena tsy ary fomba mihitsy ny fitaovana ampiasaina matoa diso hatrany ny vinavina izay matetika lasa mpanakorontana ny sain'ny vahoaka. Omaly dia efa samy niomana amin’ny fisian’ny oram-baratra izay hitondra ranobe ny olona kanefa ny tsikaritra dia maina tanteraka ny andro. Efa antitra loatra ve ny fitaovana ampiasain’ny Météo ?
MOBILE MONEY LASA MAMPIKORONTAN-TSAINA
Mikorotan-tsaina ireo mpanjifa izay manana vola ao anaty ny kaontin'ny mobile money amin'izao. Marobe ireo mijoro vavolombelona eny amin'ny tambanjotra fa manjavona tampoka ny vola ao anaty ny kaontin'izy ireo indrindra fa rehefa manontany ny kaonty. Efa azo lazaina ho be mampiasa anefa ireny tolotra ireny ka mahatonga ny tahotra eo amin'ny mpanjifa. Marobe arak’izany ny mpanjifa izay tsy sahy nampiasa ny kaontiny tato ho ato. Mila fanazavàna avy amin’ny tompon’andraikitra.
Voadaroka avokoa ireo mpitsabo izay niasa tao amin’ny CSB2 ao Ranobe, distrika Amboasary-Atsimo. Norobain’ny dahalo mitam-basy ilay toeram-pitsaboana ary nialoha an’izay dia nototaina tamin’ny vodibasy ny mpitsabo, ny mpampiteraka sy izay rehetra niasa tao. Mitaraina ankehitriny ireo mpiasam-panjakana ireo satria efa fanindroany izay no voaroba ny toerana ary izy ireo dia miady aman’aina hatrany isak’izay mitranga ny toa izany.